Mogadishu Journal » Kenya oo Malaayiin doolar ku bixineysa jaadka
Mjournal :-Beeraleyda Khaatka ee Kenya ayaa helaya miisaaniyad lacageed oo lagu horumariyo wax soo saarka beerahooda.
Dadka leh beeraha khaatka uu ka baxo ayaa ku mideysan urur u dooda xuquuqdooda, waxaana markii uu xirmay suuqii Yurub ay dowladda Kenya ku caddaadiyeen sidii ay ugu raadin lahayd meelo kale oo loo iib-geeyo jaadka ama ay wadahadal ula gali lahaayeen dalalka Yurub.
Madaxwenaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa u sheegay inay kala shaqeyn doonaan sidii sare loogu qaadi lahaa wax soo saarkooda.
Miisaaniyad sanadeedkii shalay la horgeeyay baarlamaanka Kenya ayaa waxaa ku jiray lacag dhan hal bilyan oo shilling, taas oo loo qoondeeyay hormarinta beeraleyda khaatka.
Khaatka ayaa ka mid ah waxyaabaha uu dalkan Kenya u dhoofiyo caalamka intiisa kale, oo dhaqaalaha ka soo baxa ay ku tiirsan yihiin tobonnaan kun oo qof.
Dowladda ayaa sidoo kale canshuur badan ka hesha khaatka dhoofa iyo midka gudaha Kenya laga cuno.
Qaar ka mid ah culimada Muslimiinta ee Kenya ayaa sheegay in ay “aad u qoonsadeen tallaabada dowladda Kenya ay ku taageereyso beeraleyda jaadka.